Yaa Ku Fiican Cabitaanka Biyaha Kulal Mise Biyaha Qabow? | Xaqiiqonews
Yaa Ku Fiican Cabitaanka Biyaha Kulal Mise Biyaha Qabow?
Cabitaaka biyaha ayaa halbowle u ah caafimaadka qofka,qiyaastii 70% jirka bani’aadamka ayaa ka gooban biyo,laakiin waxaa jirta su’aal da’ ah, yaa fiican kuleylka mise qabowga?
Baarayaasha ayaa sheegaya in biyaha diiran ay u fiican yihiin caafimaadka marka laga fiiriyo dhinacyo badan,waxaana ka mid ah in ay fududeeyaan shaqada dheefshiidka iyo yareynta walwalka, dhanka kalase waxaa la sheegaa in biyaha qabow ay hoos u dhigaan heerkulka jirka,waxa ayna jirka ka caawinayaan in hoos loo dhiggo miisaanka.
Qormadani waxaa aan ku soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah faa’idooyinka biyaha qabow iyo kuwa kulul, iyo sidoo kale dhibaatooyinka caafimaad ay keeni karaan labaduba.
Faa’idooyinka biyaha diiran: waxaa ka mid ah in ay hoos u dhigaan xanuunka,welwelka, waxa ayna la dagaalamaan burada hunguri mareenka , sidoo kale waxa ay hagaajiyaan wareegga dhiigga, waxa ayna jirka kala dagaalamaan sunta.
Halista Biyaha Diiran: waxa ay ka qeyb qaataan siyaadinta heerkulka jirka,waxa ay ka qeyb qaataan burooyinka ku sameysma unugyada maskaxda,sidoo kale waxa ay saameyn ku yeeshaan hurdada–waxaana lagula talinayaa in aad iskaga fogaato markaa sameyso ciyaar jimicsi ah.
Faa’idooyinka biyaha Qabow: waxaa ka mid ah in ay hoos dhigaan heerkulka jirka, waxa ay yareeyaan halista kaga imaan karta falaaraha qoraxda, waxa ayna kaa caawinayaan dhimita miisaanka, waxa ayna leeyihiin waxtar fiican marka aad jimicsi sameyso ka dib.
Halista Biyaha Qabow: waxa ay adkeynayaan howsha dheefshiidka, sidoo kale waxa ay kor u qaadi karaan halista caabuqyada hunguri mareenka.
Gabgabo: mid kasta(qabow iyo kuleyl) waxa uu leeyahay faa’ido iyo dhibaato labaduba, sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in aadan mid gaar ah badsan, waxaana fiican in qofka uu la tashado dhaqtar si uu ogaado nooca biya ee ku haboon jirkiisa iyo caafimaadkiisa.